Corporate Mutemo | Law & More BV
Bhizinesi Mutemo / Corporate Law
Iwe unoda kutanga bhizinesi here? Kana kuti iwe uri bhizimusi kare? Kana zvirizvo, ipapo iwe pasina mubvunzo iwe uchafanira kubata nemutemo webhizinesi. Patova panguva yekugadzwa kwebhizinesi iwe uchafanirwa nemubvunzo wekuti ndeipi fomu rekambani inonyanya kukodzera. Zvakare, marudzi ese echibvumirano anofanirwa kunyorwa. Kwemakore zvakawanda zvakawanda zvinogona kuchinja mukati mekambani zvakare. Fomu rekambani rinogona kunge risingakodzere zvakare. Kunetsekana kunogona kumuka pakati pevanogoverana kana pakati pevanodyidzana.
ZVINODA KUNA MUTEME WEMAHARA?
Iwe unoda kutanga bhizinesi here? Kana kuti iwe uri bhizimusi kare? Kana zvirizvo, ipapo iwe pasina mubvunzo iwe uchafanira kubata nemutemo webhizinesi. Patova panguva yekugadzwa kwebhizinesi iwe uchafanirwa nemubvunzo wekuti ndeipi fomu rekambani inonyanya kukodzera. Zvakare, marudzi ese echibvumirano anofanirwa kunyorwa. Kwemakore zvakawanda zvakawanda zvinogona kuchinja mukati mekambani zvakare. Fomu rekambani rinogona kunge risingakodzere zvakare. Kunetsana kunogona kumuka pakati pevanogovana kana kuti pakati pevanosanganira. Kana kuti pamwe bhizinesi rako harina zvinhu zvakaringana zvemumvura. Law & More inyanzvi panharaunda yemutemo webhizimusi wechiDutch. Kubva panguva yekugadzwa kusvika panguva yekumiswa kwekambani, tinogona kukupa iwe mazano emutemo uye emari.
> Mutemo wevanhu mutemo
> Corporation Kutonga
Mutemo wevanhu mutemo
We at Law & More inogona kukubatsira nekusarudza yakakodzera fomu yekambani. Kusiyanisa kunogona kuitwa pakati pemafomu ane hunhu hwepamutemo uye mafomu asina hunhu hwepamutemo. Kana bhizinesi riine hunhu hwepamutemo, rinogona kutora chikamu mukutengeserana kwepamutemo kungofanana nevanhu vakasikwa. Mukudaro kambani yako inokwanisa kupedzisa zvibvumirano, kuva nezvinhu uye zvikwereti uye inogona kuve nemhosva.
Paunenge uchida kumhanya mubatanidzwa, unofanirwa kusarudza fomu rekambani. Ndeipi fomu yepamutemo yakakodzera inoenderana nezvakasiyana zvinhu, senge zvinodiwa kuti ubatanidzwe, zviri pamutemo hunhu, yakabatana uye yakati wandei mutoro uye pamwe nekuchinjika kwemigove. Uye zvakadiniko kana mumwe wemabatanidzwa emubatanidzwa mukuru (VOF) achida kusiya kambani? Uye zvakadiniko neFlex-BV? Zvidzidzo izvi zvinotongwa nemutemo wekambani. Zvinhu zvakawanda zvinogona kurongwa muchibvumirano pamberi. Ndokusaka zvichikosha kuti ubatanidze masevhisi egweta rekambani usati wamisikidza kambani.
Iwe, sekambani, urikuda kushandira pamwe nemamwe makambani nechinangwa chekuchengeta nzvimbo yako yemusika? Kana, pane zvinopesana, nehurongwa hwekupinda mumusika mutsva? Kana iwe uchida kuumba mubatanidzwa wakasarudzika tinogona kukupa zano nezve njodzi uye mabhenefiti. Uyezve, isu, pamwe chete, toona kuti ndedzipi nzira dzekudyidzana dzakakodzera.
Kubatanidza uye kutenga
Wakagadzirirwa kubatanidza kambani yako neimwe, nekuti iwe unoda kukurudzira kukura somuenzaniso? Ikozve kune matatu mhando yekubatanidzwa: kambani kubatanidzwa, stock merger uye pamutemo kubatanidzwa. Izvo zvakanyanya kukodzera kune kambani yako zvinoenderana nemamiriro chaiwo. Law & More magweta anogona kukurayira nezvenyaya iyi.
Dzimwe nguva imwe kambani inogona kufarira neyako. Inogona kukupa iwe kuti utengese bhizinesi rako kwaari. Kana iwe uine chinangwa chekugamuchira chikumbiro ichi, saka tinogona kukupa zano zvisati zvaitika. Isu tinogone kutaurirana iwe.
Kana kambani isingade kuti migovano yavo itengeswe uye vanodzidzisa vasvike kune vanogoverana, isu tinotaura nezvekutora hukasha. Isu tinoziva nzira yekuchengetedza kambani yako mumamiriro ezvinhu akadaro uye tinogona kukubatsira nezano repamutemo.
Kunze kwezvo, zvakakosha kuti iwe uite nekushingaira kwakakodzera, kunyanya kana iwe sekambani uchitenga imwe kambani. Iwe unoda ruzivo rwese rwunodiwa kuti uite sarudzo-yekufunga sarudzo maererano nekubatanidzwa kana kutora.
Iwo magweta emakambani e Law & More inokupa iwe unonzwisisika kubvumirana kwemutemo nezvekambani yako. Isu tinoshandura mutemo mune mazwi anoshanda, kuitira kuti iwe ugone kubatsirwa chaizvo nezano redu. Muchidimbu, Law & More inogona kukupa rubatsiro rwepamutemo mune zvinotevera zvinhu:
• kuiswa kwekambani
• kudyidzana pakati pemakambani
• Kubatanidza uye kutenga
• kutaurirana nekurerutsa kana zvasvika pane kunetsana pakati pevakagoverana uye / kana vanobatana
• vatungamiriri chinhanho